Akoneshare.com – Page2– ဖေ့စဘွတ်ပေါ်ရှိသတင်းထူးများကို တစ်နေရာထဲတွင် ဖတ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ရှောင်မီမှ himo V1 စက်ဘီးသစ် မိတ်ဆက်
XIAOMI HIMO V1 isamid-high-end electric bicycle that is introduced asasimple and practical option when moving around the city withalittle help and faster. The general dimensions designed to occupy little space, is one of its main features. The Xiaomi Himo V1 is an electric-assisted bicycle thanks toa250W engine…
Buy Xiaomi HIMO V1 Portable Folding Electric Moped Bicycle For Just $293.99 (Coupon Deal) — XiaomiToday
Posted bytrooperktr April 19, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ရှောင်မီမှ himo V1 စက်ဘီးသစ် မိတ်ဆက်
သတိထားမိစေဖို့ ကလေးရှိသူများ ရာသီဥတု အရမ်းပူပါသည် မန်းလေး အပူချိန် 40-42` C ရှိပါသည် ရန်​ကုန်​ အပူချိန်​ 47° C ရှိ​နေပါပြီ ကလေးတွေ ဖျားကြသည် အပူချိန် 104-105` F ထိ ဖျားကြသည် အဖျားသိပ်ကြီးလျှင် တက်သွားနိုင်ပါသည် ကလေးဖျားလျှင် အေးသောနေရာမှာ ထားကြပါ အရိပ်ရသော နေရာမှာထားပါ Air con ခန်းတွင် ထားနိုင်ပါသည် ပန်ကာဖွင့်/ ပြတင်းတံခါးများ ဖွင့်ထားပါ အနွေးထည် မဝတ်ရ ဂျင်းသား အပူစများ မဝတ်ပေးရ ပွပွချောင်ချောင် ချည်ထည် စွပ်ကြယ်သား စပန့်သား အဝတ်များသာ ဝတ်ပေးပါ ရေပတ်တိုက်ပေးပါ ရေပတ်တိုက်လျှင် သဘက်စ ချည်ထည်စကို ရေဆွတ်၍ ကလေး၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို တိုက်ပေးပါ ပတ်ထားပါ နဖူး ဂျိုင်းကြား ပေါင်ခြံကြား မကျန်အောင် ရေပတ်တိုက်ပေးပါ နဖူးပေါ်ပဲ ရေပတ်ဝတ် တင်ရုံဖြင့် အဖျား မကျပါ တစ်ကိုယ်လုံးတိုက်မှ အဖျားကျပါမည် ရေခဲရေ မသုံးရ (အဖျားပိုတက်တတ်သည်) ရိုးရိုးရေအေးအေးသာ သုံးပါ အဖျားကြီးသောကလေး ရေချိုးပေးလို့ ရပါသည် ရေချိုးလို့ မဖျားပါ ရေမချိုးမှ အပူကြီးပြီး ကလေးတက်သွားနိုင်ပါသည် အဖျားကျဆေး Paracetamol/ Biogesic တိုက်ပေး၍ရပါသည် Paracetamol ကို တိုက်ချင်သလောက် တိုက်၍မရပါ အချိုးအဆ မှန်မှန်တိုက်ရပါမည် နည်းတိုက်လျှင်အဖျားမကျနိုင်ပါ များတိုက်မိလျှင် Para ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှာ အသည်းထိခိုက်တတ်ပါသည် Para ကို 15 mg/kg ဖြင့်6နာရီခြား အပူအရမ်းကြီးလျှင်4နာရီခြား တိုက်၍ရပါသည် (eg. body weight 8 kg ရှိသော ကလေးကို Para 120 mg အား5ml 4-6 times တစ်နေ့တာအတွက်တိုက်၍ရပါသည်) Para အများစုမှာ 120 mg ဖြစ်သည် 250 mg 150 mg ပါသောဆေးများလည်းရှိသည် ကလေးစအိုထဲသို့ အဖျားကျဆေးတောင့် Para suppositary လည်း ထည့်ပေးနိုင်ပါသည် ချွင်းချက်-သွေးဥမွှားနည်းနေသောကလေးများ Reduced Platelet count ဝမ်းလျှောနေသောကလေးများတွင် မထည့်ရပါ Para suppo သည်လည်း 120 mg / 250 mg အမျိုးမျိုးရှိပါသည် Para suppo ထည့်ထားပြီးလျှင် Para ထပ်ပြီး ချက်ချင်းမတိုက်ရပါ အနည်းဆုံး4နာရီခြားပြီးမှ တိုက်ရပါမည် ဖျားနေသော ကလေးအား မက်ကလောင် မဖောက်ရပါ စအိုဝတွင် မက်ကလောင်ဖောက်လျှင် သွေးဆိပ်ပြန့်၍ အသက်ဆုံးသည်အထိ ဖြစ်တတ်ပါသည် ရှားခြစ်တာလည်း မလုပ်ရပါ (အရေပြားကို ဇွန်း စတီးပြား သံပြားဖြင့် နီရဲနေအောင်ခြစ်ပစ်ခြင်း) ရှားခြစ်ခြင်းကြောင့် အရေပြားအောက်ရှိ သွေးကြောငယ်လေးများ ပေါက်သွားစေပါသည် အမှန်တကယ် အဖျားကျစေသောနည်းလမ်း မဟုတ်ပါ ဖျားနေသောကလေးအား အပူပါသော ရင်လူးဆေးများ မလိမ်းပါနှင့် အပူပိုတက်နိုင်သလို အရေပြားများ လန်သွားနိုင်ပါသည် လျှောလျှောလျူလျူ ဝင်လွယ်မည့် အစားအစာများကျွေးပေးပါ (ဆန်ပြုတ် ခေါက်ဆွဲပျော့ပျော့အရည်ဖျော် ကြက်ပေါင်းရည်) နို့စို့အရွယ်လေးများ အမေနို့ဆက်တိုက်ပေးပါ အဖျားတက်နေလျှင် ကလေးများမစားနိုင်ပါ ရေပတ်တိုက်ပြီး အဖျားကျဆေးတိုက်ပြီး အဖျားကျသွားချိန်တွင် အစားဝင်အောင်ကျွေးပေးပါ ကလေးများ အပူဒဏ် အန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးကြပါစေ #credit via Htar Htar myint
Posted bytrooperktr April 19, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ရာသီဥတု အရမ်းပူနေပါသဖြင့် ကလေးမိဘများ အထူးသတိထားသင့်သော အချက်များ
Posted bytrooperktr April 19, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on လူ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လိုက်နာသင့်သော လူ့ကျင့်ဝတ်များ…
စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ အိမ်အကူအလုပ်ရာ ကနေ ပြန်လာစဉ် မြန်မာငွေ ကျပ်တစ်သောင်းတန် ငွေစက္ကူအတုတွေ လက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးထားခြင်း ခံထားရသူ အမျိုးသမီးငယ်ကို ဧပြီ(၁၈)ရက်နေ့က ဒိုက်ဦးမြို့နယ်တရားရုံးက အမှုကို အပြီးအပြတ်လွှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ လယ်ကြားမြောင်ကျေးရွာမှာ နေထိုင်သူ နော်သောသွဲ့ထူးကို (၂၀၁၈)ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၆) ရက်က ငွေစက္ကူ တစ်သောင်းတန်အတု (၁၅၄) ရွက် ကိုင်ဆောင် မှုကြောင့် ဒိုက်ဦးမြို့မ ရဲစခန်း(ပ) ၁၄၂၀/၂၀၁၈၊ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၅ /၁၀၆နဲ့ အမှုဖွင့် ဖမ်းဆီး အရေးယူခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး “ကျမတို့အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နာရီဝက်ကပဲ စွဲချက်မတင်ဘဲ ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ ၂၅၃(၁)အရ ဒီတရားခံကလေးမလေးမှာ အပြစ်မရှိကြောင်းပေါ်လွင်တဲ့အတွက် အမှုကနေ အပြီးအပြတ် လွှတ်လိုက်တယ်လို့” အကျိုးဆောင်ရှေ့နေဒေါ်အေးအေးမြင့်က အတည်ပြု ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
နော်သောသွဲ့ထူးရဲ့အမှု အမှန်တရားအတိုင်းဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ကရင်တိုင်းသားရေးရာဝန်ကြီးနဲ့ ဥပဒေ ပညာရှင်တွေ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေက ဝန်းရံကူညီ အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
သတင်း — ဖြိုးကိုလင်း(ညောင်ဝိုင်း)
Posted bytrooperktr April 18, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on စင်ကာပူအိမ်အကူ အမျိုးသမီး တစ်သောင်းတန်အတုကိစ္စ ကွင်းလုံးကျွတ်လွတ်
နှစ် ၃၀ ပြည့် ၀ တိုင်းရင်းသားငြိမ်းချမ်းရေး နှစ်ပါတ်လည်သို့ ဦးခင်ညွန့် ပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာ
ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ပန်ဆန်းမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော
UWSA နှစ် ၃၀ ပြည့် ” ဝ “တိုင်းရင်းသား ငြိမ်းချမ်းရေးနှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားသို့ ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းဦးခင်ညွန့် ပေးပို့သောသဝဏ်လွာကို ဦးစန်းပွင့်( ဗိုလ်မှူးကြီးအငြိမ်းစား ) မှ ဖတ်ကြားခဲ့ကြောင်း
Posted bytrooperktr April 18, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on နှစ် ၃၀ ပြည့် ၀ တိုင်းရင်းသားငြိမ်းချမ်းရေး နှစ်ပါတ်လည်သို့ ဦးခင်ညွန့် ပေးပို့သော သ၀ဏ်လွှာ
လူဆိုးလူမိုက်ရန် ကာကွယ်သော စခန်းမှူးအား ပြည်သူများဝန်းရံ
သင်္ကြန်​ အတက်​​နေ့က ပတလ ရဲစခန်းပိုင်​
ကျွန်း​တောအုပ်​စု အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးမှ စခမထံ ဖုန်းဆက်​​
ကျွန်း​တောရွာ​နေ ဖိုးသဲဆိုသူသည်​ မူးယစ်​ရမ်းကားပြီးသူ၏​နေအိမ်​ကို မီးနှင့်​ ရှို့ သဖြင့်​ရပ်​ရွာက
စခမ မှ တပ်​ကြပ်​ကြီးတစ်​ဦး ဦး​ဆောင်​​သော အင်​အား
​ကျေးရွာ ဥက္ကဌ နှင့်​​ကျေးရွာလူကြီးများ အပါအဝင်​
ရဲတပ်​ဖွဲ့မှ အဖမ်းခံရန်​ ​ပြောသည်​
အိမ်​​ရှေ့ တံခါးဖွင့်​​ပေး​သော( တရားခံဖိုးသဲ၏ )ဇနီးကို
ဖိုးသဲမှ လည်​ပင်းကို ကိုင်းခုတ်​ဓားဖြင့်​ ၂ ချက်​ခုတ်​
စခမ ထံ ထပ်​၍ဖုန်းဆက်​တိုင်​ကြား​သော​ကြောင့်​
စခမ ကိုယ်​တိုင်​ ရဲအင်​အား၆ဦး
ပတလမြို့ ရပ်​ကွက်​ကြီးများမှ အုပ်​ချုပ်​​ရေးမှူးများ
“အဆင်​သင့်​ဘဲ သတ္တိရှိတဲ့​ကောင်​ ဝင်​လာခဲ့”ဟု
စခမ မှ ​သေနပ်​ ၃ ချက်​မိုး​ပေါ်​ထောင်​​ဖောက်​သည်​
​ကျေးရွာ အုပ်​မှူးမှ တံခါး ​ဆောင့်​ကန်​ဝင်​သည်​
​အုပ်​မှူး ​နောက်​အဆုတ်​ စခမှူး ဆက်​ဝင်​သည်​
ဆီးခုတ်​သည်​ ခါး​အောက်​ပိုင်း ​သေနပ်​နှင့်​တချက်​ပစ်​သည်​
​သွေးရှူး​သွေးတန်းဖြင့်​ စခမ ထံ ဓား​မြှောက်​ပြီးဆက်​ခုတ်​ရန်​ ​ပြေးဝင်​သည်​
စခန်းမှူးအ​နေဖြင့်​ မိမိအသက်​နှင့်​တခြားသူတို့အသက်​အန္တရာယ်​ကိုကာကွယ်​ရန်​ အခြားလမ်း​ရွေးစရာမရှိ​တော့
တရားခံဓားဖြင့်​ခုတ်​သူက ခါး​ကွေးပြီးကိုကိုင်း၍ခုတ်​သည်​ ကိုဟန်​အ​နေအထားပျက်​သွား​တော့
တရားခံဖိုးသဲ ​သေနပ်​ဒါဏ်​ရာဖြင့်​ ​ဆေးရုံတွင်​​သေဆုးံသည်​
ကျ​နော်​တို့ညီ kknw က စခမ ဘက်​မှ ဝိုင်းရံကြဖို့
ကျ​နော်​တို့အဖွဲ့ ဖုန်းနဲ့​ဆွေး​နွေးကြပြီး မနက်​ဖန်​
ပတလ စခမ ကိုသွား​ရောက်​ဝိုင်းရံကြမည်​ဆုးံဖြတ်​သည်​
ဥက္ကဌ.. .. ကျ​နော်​
တွင်း\_မှူး …. ကို​ကျော်​ဆန်း
၃ ဖွဲ့သွား​ရောက်​ပြီး စခန်းမှူးနှင့်​​တွေ့ ဆုံ
ရာဇသတ်​ကြီး အခန်း၎ ပုဒ်​မ ၈၁ အရ ခုခံခွင့်​
ဖမ်းဆည်းခွင့်​ကို မိမိမှ စခမှူးအား​ထောက်​ပြ​ဆွေး​နွေး
စခမ မှလဲ ​ဖေါ်ပြပါ ဝန်​ထမ်းလုပ်​ပိုင်​ခွင့်​ ဥပ​ဒေကို
မိမိတို့လူမှု​ရေးအသင်းများက စခမှူးနဲ့အတူ ရပ်​တည်​ပါ​ကြောင်း ဝန်းရံပါ​ကြောင်း
မကြာမှီ statement များထုတ်​ပြန်​ကာ အများသိ
စခမ မှလဲ မိမိတို့ကူညီမှုအတွက်​ဝမ်းသာအားရစွာသူ၏ ဖုန်းနံပတ်​​ပေး၍
သို့​သော်​လဲ ​လောကီတွင်​ ရဲတပ်​ဖွဲ့ဝင်​တို့၌
ထိုက်​သင့်​​သော လုပ်​ပိုင်​ခွင့်​ ကာကွယ်​ခွင့်​ ဖမ်းဆည်းခွင့်တို့မရှိခဲ့လျှင်​ မြန်​မာပြည်​ကြီး
စခမ ကို အ​ရေးယူလျှင်​ဖြင့်​
တည်​ဆဲဥပ​ဒေများအရ တုန့်​ပြန်​​ချေပ ကူညီရပါလိ့မ့်​မည်​
ကျ​နော်​တို့အဖွဲ့ က တရားဥပ​ဒေစိုးမိုး​ရေးကို ကူညီဖို့
မကြာမီ statement ထုတ်​ပြန်​ပါမည်
credit: aye lwin khaung facebook
Posted bytrooperktr April 18, 2019 April 18, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on လူဆိုးလူမိုက်ရန် ကာကွယ်သော စခန်းမှူးအား ပြည်သူများဝန်းရံ
Posted bytrooperktr April 18, 2019 April 18, 2019 Posted inUncategorizedLeaveacomment on The Journey Begins